Tun Tun's Photo Diary: Food Photography #5
Strangers' Reunion Cafe`
ဒီကော်ဖီဆိုင်ကို စလုံးသူငယ်ချင်း ခေါ်လို. ရောက်သွားတာပါ။ ကိုယ်တိုင်ဆို ဒီလိုဆိုင်မျိုး ထိုင်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ စားချင်တာ မမှာတက်မှာဆိုးလို.။ ;) Menu ထဲကဟာတွေ က မသိတာတွေက ခက်များများရယ်။ မမှာတက်ရင် တောသားလို. အထင်ခံရမှာဆိုးလို. ဒါမျိုးဆိုင်တွေ မထိုင်ဖြစ်ဘူး။ ဈေးကြီးတာလဲ ပါတာပေါ့။ နောက်ပြီး ဒီလိုအစားအသောက်တွေကလည်း ကိုယ်နဲ. သိပ်ခံတွင်းမတွေ.ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ကြီးလာတာဆိုတော့ ထမင်း၊ ဟင်းနဲ. ချဉ်ငန်စပ်ဟင်းတွေ နဲ. စားရတာပဲ သဘောကျတယ်။ ဥပမာ - ထိုင်း၊မလေး အစားအသောက်တွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ မြည်းစမ်းကြည့်တဲ့ အနေနဲ. ဒီလို အစားအသောက်တွေကို စားကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဒီ Salmon ၊ ပေါင်မုန်.နဲ. ကြက်ဥ က သူများစားတာပါ။ ကျွန်တော်က အဲ့လို အစိမ်းဆိုမစားတက်ဘူး။
မှိုကို ကြက်ကြော်လိုကြော်ထားတာ။ Mayonnaise နဲ. တို.စားတာ အရမ်းကောင်းတယ်။
ဒီဆိုင်က ထိုင်လို.သာကောင်းတာ ၊ ဈေးကတော့ မနည်းဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ. ဈေးကြီးတယ်လို.ပြောလို.ရမယ်။ မုန်.တခုကို S$20 နီးနီးလောက်ရှိတယ်။ ကော်ဖီနဲ. တွဲသောက်ရင် တစ်ယောက်စာ ကို S$30 လောက်ရှိနေပြီလေ။ S$30 နဲ. ဆိုရင် Buffet ပဲ အ၀အပြဲ သွားစားမှာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား? :)
အခုနောက်ပိုင်းမှာ စင်ကာပူက Food court တော်တော်များများမှာ မာလာဟင်းဆိုင်တွေ တော်တော်များများတွေ.လာရတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အရမ်းကြိုက်တဲ့ အစားအသောက်ပေါ့။ အဖော် ၃ယောက်၊ ၄ယောက်လောက်ရှိ၇င် မာလာဟင်းစားရတာ တန်တယ်။ စိတ်ကြိုက် အရွက်နဲ. အသားတွေရွေးပြီး ချက်ခိုင်းတာပါ။ ဒီလို တပွဲဆိုရင် ၃ယောက်လောက်စားလို.ရတယ်။ ကိုယ်ရွေးတဲ့ အရွက်တွေ၊ အသားတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး S$25 - S$30 လောက်ကျတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ခဏခဏ စားဖြစ်တယ်။ ဒီဆိုင်ကတော့ Bishan MRT နားက S11 Food court မှာပါ။
Shwe Yin Aye (ရွေရင်အေး)
Ice Kachang (ရေခဲသုတ်)
ဒီရွေရင်အေး နဲ. ရေခဲသုတ် ကတော့ Pennisula Plaza က Inlay ဆိုင်ကပါ။ ဈေးနူန်းတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ Inlay မှာ ထမင်းဟင်း တွေ သိပ်မစားဖြစ်ဘူး။ အအေးလောက်ပဲ အေးအေးဆေးဆေး သောက်ချင်လို. ၀င်ထိုင်ဖြစ်တာ။ ထမင်းစားရင် အပြင်ဘက်က မြန်မာဆိုင်တွေမှာ ပုံစား စားရတာ ပိုတန်တယ်။
Assorted Fired Salad (အကြော်စုံသုတ်)
လက်ဖက်သုတ် (Tea Leave Salad)
ဒီလက်ဖက်သုတ်နဲ. အကြော်စုံသုတ်က Pennisula Plaza ၄ထပ်က ၀င်းမြန်မာ ဆိုင်ကပါ။ တပွဲကို S$6 ပေးရတယ်။ စားလို.တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေ့မယ် အသုတ်တပွဲကို S$6 ပေးရတာကတော့ နည်းနည်းများသလားလို.။ S$4 လောက်ဆိုရင်တော့ စားပျော်တာပေါ့။ သဘောတူတယ်မလား? :P
ပိန်းဥ နဲ. ကြက်သားကြော်
Sticky rice balls dessert
ဒါကတော့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ စားခဲ့တဲ့ ဟင်းတွေပါ။ စင်ကာပူက ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ လုပ်တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တော်တော်များများကတော့ ဒီလို ဟင်းတွေပဲ ကျွေးကြပါတယ်။
at 2/26/2015 07:44:00 PM